Ifulethi eVarna, indawo emaphakathi, eduze nolwandle
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Noni
Ifulethi lethu elilungisiwe elinamagumbi amabili okulala lilingana kahle nabantu abadala abangu-4 noma umndeni onabantwana ababili. Itholakala emgwaqeni impela, ukuhambo lwemizuzu engama-20 ukusuka emabhishi amaphakathi, indawo yezitolo, izindawo zedolobha, iminyuziyamu, i-marina. Ifanele uhambo lwebhizinisi olunoxhumano lwe-inthanethi olunesivinini esikhulu olutholakalayo. Ibhikawozi elilawulwa wumndeni ngaphansi kwefulethi lizohlinzeka ngobuhle obenzelwa ekhaya nsuku zonke. Amaminithi ukusuka ezokuthutha zomphakathi ukuya ezindaweni zokungcebeleka zasolwandle namanye amadolobhana aseduze ne-Varna.
Ifulethi liyingxenye yendlu, esitezi sesibili (sokugcina) esinomnyango ohlukile. Ilungiswe ngokugcwele futhi inefenisha entsha, iflethi lethu lintofontofo futhi likhululekile ukuhlala isikhashana noma isikhathi eside.
Amagumbi okulala angu-2 - umbhede ongu-1 ongu-1, imibhede engu-2 yabantu abangashadile + nombhede wosofa egumbini lokuhlala ukuze kuhlalise abantu abadala abangu-6.
Ideski, i-cable TV, i-inthanethi nekhishi elihlome ngokuphelele.
Konke okudingekayo ukuze uhlale ngokunethezeka unikezwa. Amashidi ahlanzekile, amathawula, izinto zangasese, kanye nekhishi elihlome ngokuphelele eline-microwave/grill, isiqandisi, isitofu se-ceramic.
Zonke izinto zokusika, izibuko, izinkomishi, amapani nama-pods nazo ziyatholakala.
Umshini wokuwasha (kungase kudingeke uzithengele awakho okokugeza).
I-air-conditioning (efudumele/ebandayo) iyatholakala kuyo yonke indawo.
Umbhede wezingane/isihlalo esiphezulu unganikezwa futhi (sicela ubacele kusenesikhathi)
***KUBALULEKILE: Uma kuvakashele abantu ababili kuphela, sicela ucacise uhlobo lwegumbi lokulala oludingayo - umbhede we-kingsize noma imibhede emibili eyodwa. Sicela uqaphele ukuthi singakukhokhisa imali eyengeziwe uma yonke imibhede isetshenziswe abantu abangu-2 kuphela. Uma kwenzeka udinga amagumbi amabili ahlukene ezivakashi ezingu-2, lokho kuzoba ama-euro angu-5 ubusuku ngabunye, akhokhwa lapho ufika.***
***KUBALULEKILE: Izivakashi ezihlala isikhathi eside (ngaphezu kwenyanga eyi-1) kufanele zihlele nathi ukuhlanza kwanyanga zonke okukhokhelwa ngqo kumhlanzi, 40BGN
4.86 ·125 okushiwo abanye
4.86 · 125 okushiwo abanye
Kumaphakathi kakhulu, kodwa kuthule.. Ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zabahamba ngezinyawo, olwandle, izithuthi zomphakathi, izitolo, iminyuziyamu, iKhathedrali elikhulu kunawo wonke e-Varna, i-Yacht Port.
Ngiyatholakala ukuthi ngingene futhi ngiphume; uma ngingekho ngizohlelela umuntu ozonginika izikhiye.
***KUBALULEKILE: Uma kuvakashele abantu ababili kuphela, sicela uca…
UNoni Ungumbungazi ovelele